Ii-FAQs-Changzhou Kede Netting Co., Ltd.
Ewe, sihlala sisebenzisa umgangatho ophezulu wokupakisha ngaphandle. Sikwasebenzisa ukupakishwa kwengozi ekhethekileyo kwimpahla enobungozi kunye nabathumeli abaqinisekisiweyo bokugcina okubandayo kwizinto ezinobushushu bobushushu. Ukupakishwa kweengcali kunye neemfuno zokupakisha ezingekho mgangathweni zinokufumana intlawulo eyongezelelweyo.
Iindleko zokuthumela ngenqanawa zixhomekeke kwindlela okhetha ngayo ukufumana iimpahla. I-Express yeyona ndlela ikhawulezayo kodwa ikwabiza kakhulu. Ngokuhamba ngolwandle sesona sisombululo silungileyo kwiimali ezinkulu. Ngokuchanekileyo amaxabiso omthwalo sinokukunika kuphela ukuba siyazazi iinkcukacha zesixa, ubunzima kunye nendlela. Nceda uqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe vetshe.